आजको राशिफल (२०७४ भाद्र २५ गते आइतबार/२०१७ सेप्टेम्बर १०) – Complete Nepali News Portal
आजको राशिफल (२०७४ भाद्र २५ गते आइतबार/२०१७ सेप्टेम्बर १०)
September 10, 2017	307 Views
आज वि.सं. २०७४ भाद्र २५ गते आइतबार तदनुसार ई. सं. २०१७ सेप्टेम्बर १० तारिख
आश्विन कृष्ण चतुर्थी, अश्विनी नक्षत्र, मेष राशिको चन्द्रमा, ध्रुव योग, बालब र कौलव करण
आजको चाडपर्व र उत्सव : सोह्रश्राद्धअन्तर्गत पञ्चमी श्राद्ध, इन्द्रध्वजपातन, नानीचाया (नेवारी पर्व)
भोलिको चाडपर्व र उत्सव : सोह्रश्राद्धअन्तर्गत षष्ठी श्राद्ध
राहु काल : साँझ ०४:४० देखि ०६:१४ सम्म
यमघण्ट : दिउँसो १२:०० देखि ०१:३३ सम्म
गुलिक काल : दिउँसो ०३:०७ देखि ०४:४० सम्म
शुभ वारवेला : दिउँसो ०१:३३ देखि ०३:०७ सम्म
अमृत वारवेला : बिहान १०:२६ देखि १२:०० सम्म
लाभ वारवेला : बिहान ०८:५३ देखि १०:२६ सम्म
कर्मक्षेत्रको निर्बल चन्द्रमाका कारण विभिन्न अवसर जुटे पनि अरूलाई वचन दिने बानीले दुःख पाइनेछ । दिगो काम तथा भौतिक साधनका लागि ऋणभार समेत बढ्न सक्छ । आश्वासन बाँड्नेहरूले झुक्याउन सक्छन् । अवसर आए पनि नयाँ काममा हात हाल्नुअघि राम्ररी विचार पुर्याउनु आवश्यक छ । अवसरवादीहरूले फसाउने चेष्टा गर्नेछन् । विशेष योजना गोप्य राख्नु जायज हुनेछ । काम गर्ने अवसर मिले पनि प्रतिफल हात पार्न नसकिएला । प्रतिष्ठित काम र पदको आशा देखाउनेहरूले धोका दिन सक्छन् । भूमि, वाहन र पैत्रिक सम्पत्तिबाट सामान्य लाभ मिल्नेछ । व्यापारमा भने फाइदै हुनेछ ।
आजको छैंटौं चन्द्रमा तपाईंको अनुकूल छैन । प्रयत्न गर्दा पनि कामबाट फाइदा उठाउन सकिंदैन । यात्रामा झन्झट र झमेला आइलाग्न सक्छन् । सामान हराउने वा चोरी हुने डर हुन्छ । शत्रुको चलखेल बढ्ने छ । रोगव्याधिको प्रकोप सुरु हुनसक्छ । आहारविहारप्रति सचेतता अपनाउनु पर्छ । झैझडा र मुद्दा–मामिलाभन्दा टाढा रहेको जाति हुन्छ । बिक्रीबट्टा र व्यापारमा सामान्य फाइदाको योग छ । अधिकारका लागि केही संघर्ष पनि हुनसक्छ । प्रतिस्पर्धीहरूले अप्ठ्यारोमा पार्ने प्रयास गर्नेछन् । सहयोगीहरूको साथ पाइने छैन । प्रयत्न गर्दा पनि असफल भइने डर छ । रिसराग र क्रोधमा नियन्त्रण गर्नु राम्रो हुन्छ ।
कार्यसिद्धि मन्त्र : ॐ सों सोमाय नमः